Iindaba-Ngaba umenzi weekhamera zokwazisa ubuso ulunge kangakanani ekusebenziseni obu buchwephesha?
Ikhamera yokuqonda ubuso isebenzisa itekhnoloji ye-biometric esekwe kulwazi lobuso, isebenzisa ikhamera okanye ividiyo yevidiyo ukuqokelela imifanekiso okanye imijelo yevidiyo equkethe ubuso bomntu, ibhaqe ngokuzenzekelayo kwaye ilandele ubuso bomntu kwimifanekiso, emva koko yenze ukubonwa kobuso. Olu luthotho lweetekhnoloji ezinxulumene noko, ekwabizwa ngokuba kukuqondwa komfanekiso womntu kunye nokuqondwa kobuso. Imodyuli yokwamkelwa kobuso obuzimeleyo isekwe kwiqonga leeprosesa ezikhawulezayo ze-MIPS, ezigxunyekwe kumzi-mveliso wokuqonda ebusweni ialgorithm, kwaye idityaniswe nenzwa yokuqonda ubuso enamehlo kunye namalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Ngokusebenzisa ujongano lonxibelelwano lwe-UART kunye neesekethe ezilula zepheripherithi, imodyuli yokuqonda ubuso ibethelelwe kwimveliso yomntu wesithathu, ukuze iimveliso zomntu wesithathu zibe namandla okuqonda ubuso.
Ukuqwalaselwa kobuso kusetyenziswa ikhamera okanye ividiyo yekhamera ukuqokelela imifanekiso okanye imijelo yevidiyo enebuso, ibhaqe ngokuzenzekelayo kwaye ilandelele ubuso kwimifanekiso, emva koko yenze uthotho lwemisebenzi yesicelo enxulumene nayo kwimifanekiso yobuso efunyenweyo. Ngokobuchwephesha, ibandakanya ukuqokelelwa kwemifanekiso, ukubekwa kwendawo, ukuqinisekiswa kwesazisi kunye nokukhangelwa, njl.Ngamafutshane, ikhupha amanqaku afana nokuphakama kwamashiya kunye ne-angulus oris ebusweni, kunye neziphumo zokuthelekisa.
Umenzi wekhamera ufumana idatha yedatha eluncedo ekuhlelweni kobuso bomntu ngokwenkcazo yemilo yamalungu obuso kunye nomgama phakathi kwabo. Izinto zomboniso zihlala zibandakanya umgama we-Euclidean, i-curvature, i-angle, njl. Njl. Inkcazo yejiyometri yala malungu kunye nobudlelwane bawo bobume bunokuthathwa njengeyona nto ibalulekileyo yokwazisa ubuso. Ezi zinto zibizwa ngokuba ziimpawu zejiyometri.